DAAWO:-Kaaliyihii hore ee Trump oo been uu sheegay lagu haysto | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Kaaliyihii hore ee Trump oo been uu sheegay lagu haysto
DAAWO:-Kaaliyihii hore ee Trump oo been uu sheegay lagu haysto
Paul Manafort oo horay u soo noqday madaxii ol’olaha doorashada ee madaxweyne Trump ayaa dacwad oogeyaasha been u sheegay markii uu dambiga u qiranayay Robert Mueller oo ah dambi baare khaas ah, sida ay sheegtay xaakim Maraykan ah.
Xaakim Amy Berman Jackson ayaa go’aamisay in Manafort uu been u sheegay FBI-da, xafiiska Muller iyo xeer beegti.
Mueller ayaa hoggaaminaya baaritaan ku saabsan in Ruushku ay farogaliyeen doorashadii Maraykanka ee 2016kii.
Arrintan ayaa la xiriirta shaqadiisii Ukraine ee ahayd lataliye dhanka siyaasadda ah.
Manafort oo 69 jir ah ayaa markaas ka dib ogolaaday in uu heshiis la galo baareyaasha oo la shaqeeyo Mueller isna loo naxariisto.
Xaakim Judge Berman oo xukunkan ridday Arbacadii ayaa sheegtay in ay jiraan caddaymo ku saabsan in Manafort uu been ka sheegay arrimo ay ka mid yihiin in uu xiriir la lahaa Konstantin Kilimnik oo ah lataliye dhanka siyaasadda Ruushka. Dacwad oogaha ayaa sheegtay Kilimnik uu xiriir la leeyahay sirdoonka Ruushka.
Xukunkan ayaaa ka dhigan in Manafort oo ku jiray xarun dadka lagu hayo oo Virginia ku taalla tan iyo bishii Juunyo uu hadda wajihi karo xukun adag ama kiiskiisa dib loo furo.
Muller ayaa sannadkii hore sheegay in Manafort uu arrimo badan ka been sheegay.
Previous articleIlhaan Cumar “Haddiiba qof ay tahay inuu is casilo waa Trump”
Next articledaawo:-Darawal la baxsaday 3Milyan oo doolar
DAAWO Maqaayadaha Hargaysa oo la amray in laxiro
Axmed Madoobe oo Magacaabay xilal cusub